Volo maina sy mangatsiatsiaka, rehefa maina ny andro dia maheno ny feon'ny "papapa" static, ratsy tarehy, tsy mahazo aina ary tsy mahafinaritra.
Ny volo marevaka dia hahafaly anao, miaraka amin'izay, dia hisy toe-tsaina bebe kokoa hankafizana ny fotoana.
Na izany aza, efa nampiasa be dia be ny conditioners sy saron-doha ianao, fa ny vokatra dia tsy mbola azo antenaina. Ianao ve efa nieritreritra ny hanandrana fomba fitsaboana vaovao volo?
Fampiasana volo MAMPISEHOANA
DOZRAN - menaka manara-penitra manan-karena
Artifact fikarakarana volo miaraka amin'ny menaka sarobidy maro
Ny fikarakarana ara-tsakafo volo izay azo atao ao an-trano dia tsy mahomby firy noho ny "fonon-tsakafo" amin'ny fivarotana barbes matihanina, izay mora kokoa sy mahasalama.
Fantatrao ve fa ankoatry ny tarehy, fikarakarana ny hoditra, ary ny aromatherapy, ny menaka manan-danja dia azo ampiasaina koa amin'ny fikarakarana volo, izay mamelona ny volo sy ny follicle ny volo, ka milamina sy tsara ny volo, mamelona ny loha, ary manamafy. fakany volo.
Ny mpitsabo aroma dia tia foana ary mahay mamaha olana amin'ny menaka manan-danja, satria aleony ny zavatra voajanahary sy salama ary tsara tarehy. Momba ny volo, dia hoy izy ireo: Mazava ho azy, dia azo asiana menaka ilaina!
Ny olana momba ny sakafo mahasalama no tena olana amin'ny volo maina
Ny volo maina dia mora mivalona, izay midika fa tandindomin-doza ny ain'ny volo, ary ny ankamaroan'ny antony dia noho ny tsy fahampian-tsakafo ara-pahasalamana, ka mahatonga ny fahaverezan'ny rano, ny proteinina ary ny singa trace isan-karazany, izay mahatonga ny volo ho voan'ny volo ary mihasimba ny kalitaon'ny volo.
Fikarakarana tsy mendrika dia iray amin'ireo antony mahatonga ny volo maina koa. Ny fanasana matetika ary fandokoana matetika mety miteraka fahasimbana volo, mahatonga ny volo ho marefo sy maina.
Fanerena miasa be loatra, indrindra ho an'ireo izay efa nampiasa za-draharaha nandritra ny fotoana ela, manintona maso tsara. Rehefa mandeha ny fotoana dia ho faly foana ny atidoha.
Vokatr'izany, ny rafitra endocrine mifandraika amin'ny fitomboan'ny volo dia misy fiantraikany, mitarika amin'ny fihenan'ny glioma sebaceous tafahoatra, manakana ny follicle volo, ary mahatonga ny volo ho maina sy maina.
DOZRAN - menaka manara-penitra manan-karena, afangaro amin'ny menaka manan-danja sarobidy tokoa, afaka mamelona tsara ny volo sy ny follicle volo izy ary manampy ny volo hamerina ny hazavana, ny famononam-po ary ny fahatsorana.
Menaka manan-danja menaka hamatsiana feno ny menaka ilaina amin'ny volo
Ny akora sasany ao amin'ny haino aman-jery nentim-paharazana dia mora mijanona ao an-tampon-doha, ka mahatonga ny folobe volo hipoaka mahatonga zezika matavy sy volo mivoaka.
Maro ny conditioners dia malemy asidra, ary tsy azo ihodivirana ny hifandraisan'izy ireo ny hoho mandritra ny fampiasana, izay hiteraka fahasimbana mandritra ny fotoana maharitra.
DOZRAN - Solika ilaina amin'ny menaka manankarena, tsy misy menaka silicone, essentiel ary singa hafa. Mifototra amin'ny menaka sarobidy voajanahary ary ampiharina mivantana amin'ny volo. Izy io dia afaka mamorona takelaka fiarovana miaro tena menaka, raha mameno indray ny sakafo mahavelona ny volo, dia mamerina ny volo simba ihany koa izy io.
Ny molekiola solika olan'ny arômatika dia afaka mampivoatra ny mivezivezy ao amin'ny vatan'olombelona, ​​mampitony ny toe-tsaina tsy mihetsika, ary mihazona ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina.
Inona no tsiambaratelon'ny DOZRAN - Solon-tsakafo tena ilaina?
Raha oharina amin'ireo zavatra simika ao anaty fombafomba nentim-paharazana, ny mpitsabo aromatherapy dia aleony mampiasa menaka ilaina eo amin'ny sehatry ny volo sy ny voajanahary mba hahatratrarana ny fikoloana volo. Ny fifantina ny pormula menaka tena izy no tena laharam-pahamehana.
Mba hahatratrarana ny vokatra irina ao an-tsaina, ny ekipa mpitsabo ny hanitra dia niverimberina hatrany sy nanova ny fomba fiasa, ary farany dia nanapa-kevitra ny hampiasana menaka voaloham-boaloboka sy menaka voanio ho toy ny menaka ara-tsakafo fototra. Amin'ny menaka manitra ginger, menaka ravinkazo rosemary, menaka ylang-ylang ho menaka ny vokatr'izany. Mba hiatrehana ny fihenan'ny volo, frizz, mora latsaka ary olana hafa, dia mikendry ny fitsaboana.
Menaka voaloboka sy menaka voanio dia afaka manome ny menaka ilaina amin'ny volo, ary menaka rosemary afaka hydrates ny volo sy mahatonga ny volo ho malefaka sy malamalama.
Menaka avy any anaty afaka manamboatra volo maina sy manasaraka, ary Menaka Ylang Ylang mety hahatonga ny volo ho maizina sy tsara tarehy.
Menaka manitra afaka ihany koa sitrano ny vatana sy ny saina rehefa miaro ny volo. Ny molekiola manitra tsy manam-paharoa dia afaka miditra amin'ny vatana amin'ny alalàn'ny fofona sy ny hoditra, izay Manamaivana ny harerahana ary mampitony ny fahatsapana. Nourish, avy any ivelany ka hatrany anatiny.
Raha maharitra amin'ny fampiasana azy mandritra ny fe-potoana ianao, maina ny volo, faran-jaza, ary frizz vokatry ny mamela sy mandoko azo amboarina amin'ny lafiny iray.
Ny fampiasana maharitra dia afaka mampatanjaka ny volo, malefaka ary mamiratra, ary mamoaka fofona manintona voajanahary.
Vaovao fikarakarana volo vaovao, vonona ny hanandrana izany?